Maro anisa… tomponandraikitra | NewsMada
Maro anisa… tomponandraikitra
Ny itsitokotokoan’ny loha, hono, samy manana ny heviny. Tsy efa mba samy naneho ny heviny ve, ohatra, ireo mpifidy vaventy solontenan’ny vondrombahoakam-paritra tamin’ny fifidianana loholona farany teo? Eny, na nifandroritana be ihany aza ny hoe tsy fahafenoan’izy ireo. Samy mbola tokony hofidina izay ho mpitantana ny eny anivon’ny faritra sy ny faritany. Toy izany izay ho mpanolotsain’izy ireo avy. Nefa izay eo aloha no mpifidy vaventy hatramin’izao, araka ny fanazavan’ny filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana izay.
Mila ampandehanina ny raharaham-pirenena, tsy miandry izay tsy afaka na tsy te handeha. Vita iny ny fifidianana loholona; ny sisa, manaraka ihany. Hijoro ny Antenimierandoholona vaovao. Mazava ny fananan’ny fitondram-panjakana maro anisa amin’izany. Toy ny eny anivon’ny Antenimierampirenena ihany. Handeha amin’izay ny fanaovan-dalàna: tsy ahina hisy sakantsakana intsony? Eo koa ny fanaraha-maso ny asan’ny mpanatanteraka, ny fitondrana ny hetahetan’ny vahoaka ifotony sy ny vondrombahoakam-paritra… Na izany aza, tsy anaovana kiantranoantrano ny raharaha.
Inona indray àry ny mety ho sakana amin’ny asa fampandrosoana, raha ny lafiny politika, ohatra? Na eo aza izay hoe mpanohitra, ho tonga hatraiza amin’ny heviny sy ny heriny? Eny, na ny fombany sy ny tanjony aza… Tsy efa mahazatra hatramin’izay? Manohitra izay mitranga sy atao rehetra. Tsy hoe maninona na fanaovana zinona izany fa ny fitondram-panjakana no mila mampiseho fahombiazana sy tanjaka amin’ny asa vita. Miankina aminy ny ho fandehan’ny raharaha amin’izao. Iza na aiza amin’ny vahoaka mbola ho azo na hanaiky sy hahazaka korontana politika?
Fanapahan-kevitra ny tsy fandraisana anjara nataon’ny mpanohitra tamin’ny fifidianana loholona farany teo. Tsy manoatra lavitra noho izany ve ny tamberin’andraikitra amin’ireo olom-boafidy… maro anisa mitovy fijery? Tsy hoe manjaka tokana fa tomponandraikitra manontolo amin’izay ho fanapahan-kevitra sy izay ho vokany… hotsarain’ny tantara. Hanao ahoana? Ho hita eo…